Notebook နှင့် Laptop ရဲ့ ကွာခြားချက်.. ~ နေမင်းမောင် ( နည်းပညာ )
Home » Knowledge and FAQ » Notebook နှင့် Laptop ရဲ့ ကွာခြားချက်..
By သန့်ဇင်ဌေး2:59 AM8 comments
Notebook နှင့် Laptop ရဲ့ ကွာခြားချက်.. ကို သိချင်ပါတယ်တဲ့
ကျွန်တော် Notebook နဲ့ စပြောပါ့မယ်။ Notebook က သွားလာလူပ်ရှားရတဲ့ လုပ်ငန်းတွေနဲ့ ဖျော်ဖြေမူတွေတွက် ထုတ်ကုန်တခုအဖြစ် ဈေးကွက်တွေမှာ ရပ်တည်ပါတယ်။ နောက်တခုကတော့ Notebook မှာ chip မပါဝင်တဲ့ အပြင် ဈေးအရမ်းကြီးပါတယ်။ ဈေးကြီးတဲ့ အမျိုးအနွယ်ဝင်လို့
သမုတ်ခံရတဲ့ အမျိုးအစားတမျိုးပေါ့။ သူရဲ့ လွယ်ကူစွာသယ်ဆောင်သွားနိုင်အောင် ဖန်တီးထားတဲ့ weight နဲ့ ဘယ်နေရာကို သယ်သွားသွား ဘယ်နေရာရောက်ရောက် ဘထရီအားသာ အပြည့်ရှိမယ်ဆိုရင် သူ့မှာ အနည်းဆုံး ၄ နာရီကနေ အထက် အသုံးပြုလို့ရတဲ့ ဘထရီ ပါရှိပါတယ်။ သူဟာ ultra light အမျိုးအစားပါ။ နောက်ထပ် တခုကတော့ notebook မှာ ကျွန်တော်တို့ ရှေ့ကတည်းက သုံးလာခဲ့တဲ့ Floopy drive ကို External drive အနေနဲ့ သုံးခွင့်မရှိပေ့မယ့် စွမ်းရည်ပြည့် CD ဒါမှမဟုတ် DVD ပါရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံး အဓိကကွာခြားချက်ကတော့.. Graphic နဲ့ Screen ပါ။ Graphic ကို Laptop လောက် စွမ်းရည်ပြည့်ပါရှိမှာ မဟုတ်လို Minimum ပဲ့ ပါရှိပါမှာ ဖြစ်သလို Screeen ကလည်း 12 လက်မကနေ 14 လက်မထိပဲ့ ရှိပါတယ်။ ကဲ့ နောက်ထပ် Laptop ကို သွားကြပါဦးစို့....
အရမ်းကြီးကွာခြားတာ မဟုတ်ပေ့မယ် သိချင်တယ်ဆိုလို့ မေးလာသူ ညီလေးတွက်တော့ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ အဖြေမျိုးဖြစ်ချင်မှဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေ့မယ် အတက်နိုင်ဆုံး ကွာခြားချက်တွေကို ရေးပေးနိုင်အောင် ကြိုးစားထားပါတယ်။ ဒီထက် ပိုသိချင်တယ်ဆိုရင် အကြံပြုလိုတာကတော့ Computer ရောင်းဝယ်တဲ့ ဆိုဒ်တွေမှာ ကွာခြားချက်တွေကို အကြမ်းဖျင်းသွားကြည့်နိုင်သလို Wiki မှာလည်း တခုချင်းဆီရဲ့ အပြည့်အစုံကို အသေးစိတ်ဖတ်ရူနိုင်ပါတယ်။ ဒီစာလေးရေးဖြစ်တော့ မိသားစုကိုလည်း သတိရတာနဲ့ လာတင်ဖြစ်တာပါ။ နောက်ထပ်လည်း Laptop တလုံးဘယ်လို ၀ယ်ယူရမလဲဆိုတာရယ် ကင်မရာ အကြောင်း ကို ကျွန်တော် ရေးလက်စတွေ ရှိပါတယ်။ ရေးပြီးပြီဆိုရင်တော့ ပြန်လည် မျှဝေပေးဖို့ ကျွန်တော် ပြင်ဆင်ပါဦးမယ်။ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အကျဉ်းချုပ် english လိုလေး ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
တကယ်ပါ မေထားတဲ့ သူငယ်ချင်းကိုရော
ပြန်ဖြေပေးတဲ့ ကိုသန့် ဇင်ဌေး ကိုပါ
wai December 19, 2011 at 10:46 PM
အရမ်းကောင်းတဲ့postလေးဘဲဗျာ ကျနော်လဲအရင်ကတော့ဒီလောက်ထိမသိခဲ့ပါဘူး အခု့လိုရှင်းပြပေးတဲ့ကိုသန့် ဇင်ဌေး ကိုအရမ်းကျေးဇူးတင်းပါတယ်ဗျာ နောက်များလဲခုလိုလေးရှင်းပြပေးပါဦး ခုလိုလေးတွေရှင်းပြပေးတော့ကျနော်တို့လိုလေ့လာနေသူုအဖို့တန်ဘိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ပညာလေးတစ်ခုပါဘဲ
phone win December 21, 2011 at 5:33 AM
ကျွန်တော်လည်း အရင်တုန်းက အဲ့ဒီလို အတူတူဘဲလို့ထင်ခဲ့ပါတယ်---
lional January 30, 2012 at 5:13 PM
thanksalot brother ...
AUNG SAN OO February 22, 2012 at 12:20 PM
ကျေးဇူးပါ အစက်ကို . တကယ်ကောင်းပါတယ် နောက်လဲ ဆက်ရေးပါဦး.
KoKaung March 14, 2012 at 2:02 PM
Notebook နဲ့ Laptop ကွာခြားချက်ကိုလုံးဝသိသွားပြီဗျာ
စစ်ငြိမ်းလူ March 15, 2012 at 11:06 PM